Top Shinoa Mampiaraka Toerana - Ny Fomba Tandrefana Ny Olona Afaka Hihaona Vehivavy Sinoa Amin'ny Aterineto
Top Shinoa Mampiaraka Toerana — Ny Fomba Tandrefana Ny Olona Afaka Hihaona Vehivavy Sinoa Amin’ny Aterineto
Sinoa ny vehivavy no tsara tarehy, fa ny antso mandeha tsara mihoatra noho izany. Maro ny Tandrefana ny lehilahy tia vehivavy Shinoa noho ny faharanitan-tsaina, ny fahasoavana, tsy fivadihana sy ny maro hafa tena tsara toetra. Raha ny marina, ny fivoriana ny vehivavy iray any Shina, indrindra fa ho an’ny olona miaina ao amin’ny U. S, na any an-kafa any amin’ny tany Tandrefana, dia afaka toa toy ny fanamby, fa ny marina dia somary mora. Vehivavy shinoa dia tsy hay tohaina ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Fananganana fifandraisana miaraka amin’ny vehivavy Sinoa dia mety ho sarotra kokoa, na izany aza, indrindra raha tsy miaina ao Shina na miteny Mandarin. Soa ihany, eto izahay mba hanampiana. Miaraka kely ny fahalalana sy ny fiomanana, ny traikefa amin’ny Sinoa ny olon-tiany dia ho mahomby sy mahafa-po. Ianao no mety hahita ny tena fitiavana. Online no fomba tsara indrindra mba hihaona voalohany vehivavy Shinoa, indrindra raha mipetraka any amin’ny firenena Tandrefana. Te-hanalavitra ny jeneraly mampiaraka toerana, toy ny Lalao na eHarmony. Ny marimarina kokoa, ny vintana noho ny fitadiavana fifandraisana manan-danja manatsara tanteraka raha mampiasa ny toerana izay manjohy manokana ireo vehivavy Aziatika izay mitady ny hihaona Tandrefana ny olona. Fantatra ihany koa amin’ny Sinoa ny Fitiavana Rohy, izany no malaza iray hafa safidy. Ity takelaka ity dia alefaso amin’ny alalan’ny Cupid Media tambajotra ny mampiaraka toerana. Isika efa fahombiazana lehibe amin’ny toerana hafa mihazakazaka amin’ny Cupid Fampahalalam-baovao, anisan’izany ny Afro fampidiran-dresaka sy Brezila Cupid. Shina Fitiavana Cupid dia amin’ny teny anglisy sy mifantoka amin’ny Tandrefana ny olona mitady ny hihaona tena vehivavy izay miaina ao Shina. Ny toerana efa maherin’ny iray tapitrisa ireo mpikambana, ary manolotra ny firesahana, ny mailaka, ny lahatsary sy ny hafatra. Izay mety ho mpampiasa dia afaka mijery ireo lalao maimaim-poana. Ity no lehibe indrindra mampiaraka toerana ao Shina. Naorina tamin’ny alalan’ny Shanghai mpianatra ho mpanao gazety, amin’izao fotoana izao Jajuan no malaza indrindra mampiaraka toerana ao Shina, ary ny iray amin’ireo betsaka indrindra ao amin’ny toerana iray manontolo web. Jajuan voasoratra amin’ny teny Sinoa. Raha toa ianao ihany no mahay miteny anglisy ianao dia mbola afaka mampiasa ilay tranonkala, fa ianao no mila mampiasa ny mpandika teny fandaharana sasany karazana. Ny ankamaroan’ny tranonkala navigateur dia nandika ny toerana ho anareo, ary misy maimaim-poana maro ny fandaharana azonao ampiasaina mba handika private messages. Ity no malaza iray hafa toerana, miaraka amin’ny be dia be ny safidy maimaim-poana mba hijery. Mariho fa ity tranonkala ity dia nifantoka tamin’ny kaontinanta iray manontolo Azia. Raha toa ianao mitady vehivavy Shinoa ihany, ianao tsy maintsy manamboatra ny search toe-javatra. Na izany aza, mety tsy maintsy hitady amin’ny alalan’ny mombamomba izay ianao no tsy liana amin’ny. Raha ny tanjona eto dia ny maharitra, ny fifandraisana akaiky, zava-dehibe ny tsy maika amin’ny misy mifanatri-tava fivoriana. Shina dia malaza ho sarotra na dia efa za-draharaha mpandeha. Misy ara-kolontsaina, — taratasy, ary na dia ny sakana ara-jeografika izay mpandeha dia tsy maintsy ho vonona ny hamakivaky. Noho izany antony izany, dia manoro hevitra anao hanana mafy, mikasika ireo fifandraisana an-tserasera alohan’ny hirosoana amin’ny travel. Raha ny olona rehetra no tsy manam-paharoa ho an’ny tsirairay, misy fahasamihafana ara-kolontsaina dia tokony ho fantatry ny. Raha tsy nisy ny fahatakarana ny fomba Sinoa vehivavy dia mora manao zavatra amin’ny toe-javatra sasany, ny fifandraisana mety ho voahelingelin’ny. Noho izany, ny fampitandremana izay ireo toetra ireo dia tsy ampiharina amin’ny olona rehetra, ity misy topimaso ny sasany iombonana toetra mifandray amin’ny vehivavy Shinoa. Mahasoa — Maro ny vehivavy Shinoa no tena mihafy sy mitsi. Ny stereotype fa vehivavy Shinoa ireo ihany no liana amin’ny Tandrefana ny olona ny vola fotsiny ny tsy marina. Ianao dia azo inoana fa ho olona iray izay dia te-hijanona ao amin’ny trano fandraisam-bahiny tsara fanahy kokoa ary hihinana amin’ny fancier trano fisakafoanana. Maro ny vahoaka Sinoa ny ankamaroan’ireo ny volany amin’ny tahiry, tsy ny ara-nofo entana. Azo antoka fa izany tsy midika vehivavy Shinoa dia afa-tsy tia Western olona izay manana vola be. Fa tsy, izany dia midika hoe vehivavy Shinoa dia tsy tena mahazo aina amin’ny fiainana tena fanomezana be dia be ny fomba fiainana. Na dia ianao raha ny olona manetry tena dia midika hoe ianao dia mbola afaka mahita fahombiazana lehibe eo amin’ny fifandraisana amin’ny vehivavy Shinoa. Tsy mivadika — vehivavy Shinoa dia fomba nentim-paharazana tena mahatoky ny vadiny sy ny sipa. Raha toa ianao ka tsy mahalala izany, izany dia mety ho kely mahagaga. Ny Shinoa mpiara-mitory mety fawn ny anareo, ny fanitsiana ny akanjo, manamboatra ny volo, ary raha tsy manao fikojakojana mahazatra. Ankoatra izany, dia aza gaga raha ny Shinoa sipa dia tsitrapo ho anao ny sakafo na hitondra ho anao ireo zava-pisotro. Fandrahoan-tsakafo dia ampahany lehibe amin’ny kolontsaina Sinoa, sy ny fomba nentim-paharazana ny vehivavy no manao izany. Mivantana — vehivavy Shinoa efa be vazivazy, saingy izany dia tsy mitovy amin’ny mahazatra Tandrefana vehivavy. Vehivavy shinoa dia afaka ny ho tena tapa-doha. Ny fananana toetra tia mampihomehy dia matetika tena maina sy nisakana. Nandritra ny fivoriana voalohany, dia toa toy ny hoe misy vazivazy ianao ho lavo fisaka. Ao ny zava-misy, ny vehivavy Shinoa dia afaka ny ho tena voatokana, indrindra rehefa mihomehy sy misangy manodidina. Aza manahy — zavatra dia afaka toa toy ny standoffishness dia matetika fotsiny ny saro-kenatra, mihoatra demure toetra. Ny ankamaroan’ny vehivavy Shinoa ho tonga bebe kokoa avy-mitranga manodidina anao rehefa mahazo ny mahafantatra anao tsara kokoa. Misy maro maneran-tany fehin-kevitra momba izay vehivavy Shinoa mitady ao amin’ny Tandrefana ny olona. Voalohany indrindra, tiany ny olona izay tsara sy izay hitondra azy ireo tsara. Tsara fanahy ny fo no zava-dehibe kokoa noho ny tarehiny, na ara-bola fahombiazana. Manaraka, vehivavy Shinoa hijery ho an’ny fianakaviana ny olona. Tsy voatery hoe tsy maintsy miomana amin’ny fananan-janaka, fa ny ankamaroan’ny Shinoa ny vehivavy dia azo antoka fa liana amin’ny fanombohana ny fianakaviana. Koa, Sinoa ny vehivavy mazàna no tombony amin’ny fianakaviana amin’ny ankapobeny. Raha manana be dia omena ny fianakaviana, maro vehivavy Shinoa ho hitanao fa mahazo aina sy ny mahazatra. Farany, vehivavy Shinoa liana amin’ny lehilahy iray izay heverina ho ara-bola sy ara-tsosialy andraikitra. Toy ny rakotra ambony, izany dia tsy midika hoe ny olona manana ho multimillionaire. Fa, ny vehivavy Shinoa sitrakao fotsiny mantsy ny lehilahy amin’ny fidiram-bola tsy tapaka iza no tsy ho adaladala ara-bola ny fanapahan-kevitra. Ara-tsosialy, tiany ny olona izay mavitrika ao amin’ny fiaraha-monina. Ny manokana ny fifandraisana ara-politika tsy tena zava-dehibe, fotsiny ianao fa mpanao asa soa, ara-drariny mpikambana mavitrika ao amin’ny fiaraha-monina. Mifandray amin’izay ihany, ianao tsara tarehy be ny te-tsy miresaka momba ny olana ara-politika amin’ny ankapobeny, sy ny governemanta Shinoa indrindra. Tena tsy misy antoka ny fifandraisana an-tserasera, na dia amin’ny alalan’ny fiarahana toerana, ka tsy ho fanaraha-maso ny sasany lamaody avy amin’ny governemanta. Izany no tsara indrindra mba fotsiny tsy misy na dia handika ny lohahevitra ara-politika. Rehefa maka fotoana kely mba mianatra momba ny kolontsaina Sinoa, ary ny vehivavy Shinoa, dia afaka hahita fahombiazana lehibe ny fampandrosoana ny tantaram-pitiavana fifandraisana. Nefa aza manahy be loatra. Vehivavy shinoa izay mitady ny hihaona Tandrefana lehilahy azo antoka fa mahatakatra fa misy handeha ho fikorontanana ara-kolontsaina sasany, indrindra amin’ny voalohany. Rehefa hihaona voalohany amin’ny vehivavy online, raiso izany miadana sy fotsiny ny tenanao. Somary tany am-boalohany teo ianao, te-hametraka fanontaniana momba ny inona ny vehivavy te-avy amin’ny fiainana. Dia izy liana amin’ny fanombohana ny fianakaviana? No izy dia misokatra ho an’ny mety ny nampihetsi-po ny firenena hafa? Inona no toetra tsy izy hitady olona, ary inona no ny soatoavina amin’ny ankapobeny? Ny antony mahatonga anao hanontany ireo karazana fanontaniana dia satria te haingana hametraka ny sasany fiaraha-mientana ifampizarana ny soatoavina sy ireo tanjona, na olon-kafa ianao, na fotsiny ny fandaniam ny fotoana. Shina dia, mazava ho azy, ny tena lehibe firenena sy ny mety ho fiarahana amin’ny dobo ny vehivavy Shinoa dia be. Amin’ny fanompoana mampiaraka an-tserasera, mety afaka hihaona be dia be ny vehivavy ao anatin’ny fotoana fohy. Mazava ho azy, ny fomba tsara indrindra mba hahita mifanaraka mpiara-miasa dia ny manana fahatakarana mazava momba ny zavatra tianao. Mety te-tena mipetraka ary manaova lisitra.
Ny fomba ela ianao no te-hanam-bady? Inona no toetra tianao ve ny mpiara-miasa, ary inona no toetra tianao mba hisorohana. Tandrefana maro ny olona efa nahita mahafinaritra Shinoa ianao, ary afaka ihany koa. Vehivavy shinoa dia manan-tsaina, tsy mivadika, mailaka-witted, ary tsara tarehy. Na dia tsara kokoa, betsaka, maro ny vehivavy ao Shina izay te-hihaona, ny daty sy ny raiki-pitia amin’ny Tandrefana ny olona. Amin’ny kely fotsiny ny fiomanana, dia afaka mivory ny ankizivavy Shinoa ny nofy. Misy efatra manan-danja ara-kolontsaina ny olana izay tokony adiresy haingana araka izay azo atao. Ireo dia ho mahazatra samihafa izay tokony ho vonona hiatrika. Ireo tsy tena fakàna ianao hitondra ny voalohany. Fa kosa, ireo no lohahevitra mba hiresaka indray mandeha ny olon-tiany no nanomboka ny hampivelatra, rehefa roa anao ary izy no nametraka anao maniry ny hanaraka ny fifandraisana.
Ny olana efatra ireo
Dia ny ray aman-dreny mamela azy hanambady anao? Dia manaiky anao amin’ny maha-mpikambana ao amin’ny ny fianakaviana? Teratany shinoa maintsy samihafa ny hevitry ny vahiny. Ny fianakaviana sasany dia mandrara izany tsotra izao. Ny hafa dia efa tsy misy olana. Misy dia tena tsy misy fitsipika manokana eto — tena miankina amin’ny tsirairay ny fianakaviana. (Fa ny Mandarin ny teny izay midika vahiny. Raha tsy hardcore teny ratsy, fa koa tsy matetika ampiasaina amin’ny mahalala fomba resaka. Miezaka ny tsy fampiasana ny teny hoe ny tenanao, indrindra fa amin’ny olon-tsy fantatra.). Dia izy liana amin’ny mandao an’i Shina izy ary monina any amin’ny firenena hafa? Ny mety tsy ho afaka hifindra any Shina dia mampino lavitra, satria any Shina no tsy handray ny maro amin’ny mpifindra monina. Mba tena efa ela, ny fifandraisana manan-danja, dia tsy maintsy ihany no mandinika ny vehivavy izay vonona hifindra ho anao. Dia ny ray aman-dreny amin’izao fotoana izao dia miezaka ny mandamina ny fanambadiana ho azy? Izany dia mety ho fahita any Shina, ary mety midika ny zavatra maro. Raha ny vehivavy no efa nandamina ny hanambady, dia mety tsy manana be dia be ny fahafahana miaraka aminy. Mety hisy toe-javatra sasany izay ianao dia ho afaka manome fiainana tsara kokoa noho ny amin’izao fotoana izao ho avy ny vadiny, ary ny fianakaviana mety hisafidy ianao, fa tsy. Raha ny ray aman-dreny miezaka ny mandamina ny fanambadiana, fa tsy hita tsara ny kandidà, mety ho vintana. Ny vady sahaza amin’ny masony dia mety miankina be dia be ny hevitry ny vahiny manambady any amin ny fianakaviany. Na izany aza, raha toa ny fianakaviana tia anao, fampivelarana ny fifandraisana no be mora kokoa. Inona ny fiainana tanjona? Mety ho gaga ianao. Momba ny Tandrefana vehivavy, ianao lavitra kokoa ny maheno fa ny vehivavy Sinoa manana tanjona ny hanambady. Na inona na inona, te-hahafantatra azy amin’ny ankapobeny ny fiainana tanjonao, mba hahafahanao mahita raha ry zareo mifanaraka amin’ny manokana. Misy isan-karazany ny fanontaniana fanampiny dia afaka mangataka amin’ny maha-ianao fampivelarana ny fifandraisana. Serasera amin’ny aterineto no fomba lehibe mba hahalala ny olona. Amin’ny hafatra, afaka mieritreritra izay te-hilaza mialoha. Indray mandeha ny haavon’ny fampiononana no nametraka, dia mety kokoa hafatra amin’ny horonantsary na amin’ny chat. Maro mampiaraka asa manolotra telo rehetra endriky ny fifandraisana. Tsy ho saro-kenatra mba mangataka sary fanampiny. Mitandrema ny amin’ny misy sary izay toa natao Photoshop na raha tsy izany dia mijery kely loatra ny tonga lafatra. Mazava ho azy, dia tokony ho vonona ny hamaly amin’ny sary ihany. Anontanio azy izay tiany ho atao ao an-nanam-potoana. Inona no izy ve ny faran’ny herinandro miaraka amin’ny namany? Inona no an-tanindrazany tahaka? Ny sakafo dia mety ho lohahevitra malaza be, koa. Anontanio azy izay karazana sakafo izy mankafy mahandro sakafo ho an’ny tenany, ary inona no sakafo izy mankafy mahandro sakafo ho an’ny hafa. (Izany no matetika ho roa samy hafa ny valiny.) Farany, manontany azy ny momba ny zavatra niainany niaraka vahiny. Izy no mitondra ny datin ny lehilahy iray avy amin’ny firenena Tandrefana alohan’ny? Raha mazava ho azy fa ny azy aloha dia ny raharaham-barotra, dia afaka ny ho ilaina ny mahafantatra azy ankapobeny traikefa amin’ny hafa kolontsaina. Mampiaraka ny vehivavy Sinoa dia afaka ny ho mahafinaritra traikefa. Amin’izao fotoana izao, ny teknolojia dia mamela ny olona rehetra manerana izao tontolo izao mba hihaona. Raha liana ianao amin’ny fihaonana ny vehivavy Sinoa, tsy maintsy manana sarimihetsika star tarehiny na ny lehibe kaonty any amin’ny banky. Fotsiny ianao mila ho mafana, tena olona amin’ny fahavononana ny mianatra momba ny kolontsaina Sinoa. Ireo toro-hevitra tsotra, dia afaka mandeha an-tserasera amin’izao fotoana izao, ary manomboka fivoriana ny vehivavy tsy ho ela. Ny fitiavana mety ho marina tsindry. Tena manadala ankizilahy endri-javatra tsy manavakavaka famerenana ny fiarahana toerana manerana ny aterineto. Mahalala ny tsara sy ny ratsy, mitady ny tonga lafatra mampiaraka toerana ho anao. Isika hizaha toetra azy rehetra, ka tsy manana ny
← Izay Mahita Vehivavy Shinoa ho amin'ny Fanambadiana - Iraisam-pirenena ny Fiarahana Torohevitra ho an'ny Lehilahy Mitady Vady Vahiny
Tadiavo ao amin'ny Kolontsaina Sinoa sy ny Fiarahana Lovelorn →